भारतीय पर्यटकलाई नेपाल आउन निम्तो » खबरहरुको एउटै केन्द्र
भारतीय पर्यटकलाई नेपाल आउन निम्तो
सोमबार, जेष्ठ २१, २०७५ १२:५६ मा प्रकाशित !
भारत – नेपालका पर्यटन व्यवसायीले भारतीय पर्यटन व्यवसायीलाई नेपालमा शान्त वातावरण रहेकाले भारतका पर्यटकलाई ढुक्क भएर नेपाल घुम्न आउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको लखनउ शहरमा रहेका पर्यटक व्यवसायीबीच आइतबार साँझ भएको कार्यक्रममा क्षेत्रीय होटल संघ नेपाल सौराहाका अध्यक्ष सुमन घिमिरेले नेपालमा द्वन्द्व समाप्त भएको र शान्ति बहाली भएकाले ढुक्क भएर भारतका पर्यटकलाई नेपाल घुम्न आउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । उनले नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व सकिएर स्थायी सरकार निर्माण भइसकेको हुनाले अब बन्द हड्ताल द्वन्द्वलगायतका कारण पर्यटकले दुःख नपाउने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का सदस्य सचिव भइसक्नुभएका पर्यटन व्यवसायी युवराज लामाले अब नेपालमा द्वन्द्व अन्त्य भएको र देश समृद्धितर्फ अगाडि बढिरहेको बताए । “द्वन्द्वका कारण डराउनु पर्ने समय सकिएको छ” लामाले भने । “ढुक्क भएर नेपाल घुम्न आउनुहोस् अब बन्द हडतालका कारण दुःख पाउनु पर्दैन ।”
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पर्यटन व्यवसाय धराशायी अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसपछिको भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण यो व्यवसाय थप प्रभावित भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी भारतीय पर्यटन व्यवसायीले नेपालमा ढुक्क भएर घुम्ने वातावरणको विश्वासिलो आधार खोजेका थिए ।
उनीहरुलाई नेपाली पर्यटन व्यवसायीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा जानकारी दिँदै अब पूर्ण शान्ति बहाली भएर मुलक समृिद्धतर्फ अगाडि बढेको भन्दै भारतीय पर्यटन व्यवसायीलाई विश्वस्त दिलाएका थिए ।
सो अवसरमा ट्राभल एजेन्टस एशोसियशन अफ इण्डिया, उत्तर प्रदेश एण्ड उतराखण्ड च्याप्टरका अध्यक्ष सुनिल सत्यवक्ताले नेपालमा शान्ति बहालीसँगै पर्यटक पठाउन सकिने बताउनुभयो । २२ करोड जनता भएको उत्तर प्रदेशबाट मात्र अन्य देशमा एक महिनामा दुई लाखभन्दा बढी पर्यटक घुम्न जाने भन्दै उहाँले समन्वय गरेर अघि बढ्न सकेमा नेपाल नजिकको गन्तव्य हुने बताउनुभयो ।
यहाँका ८० भन्दा बढी ट्राभल एजेन्टसले विभिन्न देशमा पर्यटक पठाउने गरेको भन्दै अब नेपालमा पर्यटक पठाउनेतर्फ बढी ध्यान दिने आश्वासन दिनुभयो । उत्तर प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी पर्यटक थाइल्याण्ड, सिंगापुर, हङ्कङ, दुवई जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी टुर अपरेटरले सीमामा पर्यटक सवारी र ढुवानी छुट्टै चेकजाँच गर्न, सडकमा पर्यटकीय गन्तव्यको दूरीको बोर्ड राख्न, नारायणगढ मुग्लिन सडक छिटो सक्न, निकुञ्ज प्रवेश र गतिविधिको मूल्यसूची बेवसाइटमा राख्न आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाली पर्यटन व्यवसायीले नेपालको सीमा क्षेत्र नजिकै रहेको लखनउबाट करीब १० घण्टाको दूरीमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पुग्ने भएकाले सबैभन्दा कम खर्चमा नेपालको पर्यटकीय गन्तव्य घुम्न सकिने बताएका थिए ।
पर्यटन विकास समिति चितवनका महासचिव विश्वराज सुवेदीले लखनउवाट हिँडेको दिन साँझ सौराहामा बसेर निकुञ्ज र आसपासको पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकन गरी फर्कन सकिने बताउनुभयो । उहाँले चितवन निकुञ्जमा दुर्लभ वन्यजन्तु एक सिंगे गैँडा, पाटेबाघ, घडियाल गोही, हात्ती, गौरीगाई, चरालगायतको अवलोकन गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।
चितवनको सौराहबाट छोटो समयमा पवित्र तीर्थस्थल देवघाट त्रिवेणी जनकपुर र पशुपति नाथको दर्शन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रबन्धक उदय भट्टराईले नेपालमा आउने पर्यटकमध्ये भारतीय पर्यटक १६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै देशमा शान्ति बहाली भएसँगै यो संख्या बढाउन अभियान थालिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालका पर्यटकीय गन्तव्य पुग्न सकिने समय र दूरीलगायतका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यका विषयमा प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले नेपालका पर्यटन व्यवसायी भारतीय सीमा शहरमा आइपुगेका हुन् । चितवनलगायत चार जिल्लाका पर्यटन व्यवसायीले यसअघि पटना र बनारस क्षेत्रमा रहेका पर्यटन व्यवसायीसँग अन्तक्र्रिया गरेका थिए ।
PREVIOUS POST Previous post: धनगढीमा ९ लाख लुटेर भागेका युवा काठमाडाैँबाट समातिए
NEXT POST Next post: Ministers Thapa and Basnet Conduct Emissions Test
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, जेष्ठ २१, २०७५ १२:५६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, जेष्ठ २१, २०७५ १२:५६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, जेष्ठ २१, २०७५ १२:५६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, जेष्ठ २१, २०७५ १२:५६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, जेष्ठ २१, २०७५ १२:५६